Funda yonke into enxulumene nezinga lokuhlaziya izixhobo zakho Apple | Ndisuka kuMac
Funda yonke into enxulumene nezinga lokuhlaziya izixhobo zakho Apple
UManuel Alonso | | Tutorials
Enye yezinto esiziqwalaselayo xa kuthengwa isixhobo kukukwazi ukugcina kunye nesantya saso xa usebenza neenkqubo ezininzi ngaxeshanye. Ngokukodwa kwiMac, leyo yinto ebaluleke kakhulu. Kuyinyani ukuba nge-chip entsha ye-M1 ukuvela kwezi khompyutha kube yinto engcolileyo. Enye into ekuthethwa ngayo kakhulu enkosi kwezi Macs zintsha kukukwazi ukuhlaziya isikrini sekhompyuter kunye nomthamo omkhulu abanawo. Inqanaba eliphezulu lingcono? Kodwa leliphi izinga lokuzihlaziya? Ngaba iya kuba luncedo kum?. Yiloo nto esiza kuzama ukuyicacisa kweli nqaku.
1 Yintoni ireyithi yokuhlaziya isikrini?
1.1 Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kwireyithi yokuhlaziya
2 Yilumkele oku. Ireyithi yokuhlaziya ayifani nomlinganiselo wesampulu.
3 Izinga lohlaziyo kwizixhobo ze-Apple
3.1 I-iPhone 12 kunye ne-13
3.2 Iikhompyuter zeMac
Yintoni ireyithi yokuhlaziya isikrini?
Xa sithetha ngereyithi yokuhlaziya, ngokusisiseko sibhekisa kwi isantya apho umxholo kwikhusi uhlaziywa. Njengayo yonke into enokulinganiswa, sinalo eli xesha ukuba sihlalutya kwimifanekiso ngomzuzwana. Ngale ndlela, iyunithi yokulinganisa esetyenziselwa ukumisela ireyithi yokuhlaziya ipaneli yiHertz (Hz).
Besinokuphendula omnye wemibuzo ebesizibuze yona ekuqaleni kweli nqaku, kancinane ngentla kwale migca. Okukhona uphezulu izinga lohlaziyo lwesikrini, kokukhona ukuguquguquka okukhulu eboniswa ngayo imifanekiso evela kuyo. Ngokusisiseko kuba ngexesha elidlulayo phakathi komnye wale mifanekiso kweso sithuba sexesha, siya kuba nohlaziyo olukhulu. Ngoku, asiyogolide yonke emenyezelayo. Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba kukho uluhlu lweengxaki ezinxulumene nazo kwaye esiza kuthetha ngazo ngoku. Kodwa njengoko kudla ngokuthiwa umfanekiso uxabisa iwaka lamagama, apha sikushiyela ividiyo apho le ngcaciso iboniswa khona.
Ngoku uninzi lweethelevishini, iifowuni, iikhompyuter, kunye nezixhobo zesikrini, tBasebenza ngezinga lokuhlaziya le-60 Hz. Nangona kuyinyani ukuba kukho iikhompyuter apho la maxabiso afikelela kumanani adizzying. Ewe, nathi sinazo ii-smartphones ezifikelela kumanani ukuya kuthi ga kwi-144 Hz. Kuyinto enhle kuba ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokuhlaziya, njengoko sele sibonile, kuthetha imifanekiso epholileyo kwaye ngaloo ndlela ayibonakali nje ngcono kodwa inciphisa ukukhathala okubonakalayo kakhulu. Oko kubalulekile, kwihlabathi apho iteknoloji kunye nemiboniso ibaluleke kakhulu kwaye iphantse ibaluleke kakhulu.
Nangona bekusoloko kusithiwa la mazinga aphezulu okuhlaziya afakiwe kwizixhobo zeGamers, kufuneka kukhunjulwe ukuba i-niche yentengiso sele yandisiwe. kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye iifowuni ezininzi kunye neetafile sele zibandakanyiwe. Sinomzekelo we-iPad Pro kunye ne-iPhone 12 kunye ne-13, umzekelo.
Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kwireyithi yokuhlaziya
Lihlazo kodwa asizizo zonke iingenelo kumazinga aphezulu okuhlaziya. Kuya kufuneka uvavanye yonke into iyonke kwaye ngoku siyazi ukuba ithetha ukuthini, makhe sibone ukuba kwenzeka ntoni kuyo.
Ulwelo kunye nokuguda. Oku kucacile. Okona kuphezulu izinga lokuhlaziya isikrini sesixhobo, sinokuguda okukhulu kunye nokuguquguquka kwemifanekiso. Oku kuthetha ukuba utshintsho kwisicelo sitshintsha, xa siskrola kwi-iPhone okanye sihambisa imouse ngokukhawuleza kwiwebhusayithi kwi-Mac, okanye sisuka kwesinye isicelo siye kwesinye, siya kwenziwa ngokutyibilikayo kwaye ke kuya kuba nobungane ngakumbi. .
Izinga lokuhlaziya eliphezulu lithetha i-eyestrain encinci kwaye ke ngoko singonwabela ngcono amava ngezikrini.
Eyona nto ingalunganga yokuba nesantya esiphezulu sokuhlaziya ngokungathandabuzekiyo a inkcitho yamandla ephezulu kweso sixhobo. Oku kuthetha ukuba sinokuzimela okuncinci kwaye ke, kwimeko yee-iPhones, ibandakanywe kuphela kwiimodeli zePro ezinebhetri enkulu.
Ayiyiyo yonke imixholo ekhoyo ngereyithi yokuhlaziya ye-120Hz. Oku kufana nokuba nomabonakude okwaziyo ukudlala umxholo we-8K. Oku kulungile, kodwa ukuba umxholo ngokwawo awukho kwi-8K, ngoko asikhathali malunga nomthamo kamabonakude.
Isikrini esikhulu kwaye siphezulu izinga lokuhlaziya, Isixhobo sibiza kakhulu.
Yilumkele oku. Ireyithi yokuhlaziya ayifani nomlinganiselo wesampulu.
Kwiinyanga zamva nje, abanye abavelisi abaye babonisa izixhobo zabo isikrini sidlula umqobo we-60 Hz yokuhlaziya isikrini, baye babhekisa izinga lesampulu yephaneli. Sibhekisela kwimeko yezinye izixhobo ze-Samsung. Ipapashiwe ukuba isikrini sayo sihlaziywa kwi-120 Hz kwaye inezinga lesampula le-240 Hz.
Ireyithi yesampulu, nayo ilinganiswe kwiHertz, ibhekisa kwinani lamaxesha isikrini silandelela igalelo lochuku. Ngaloo ndlela, ukuphakama kwexabiso le-frequency, isezantsi i-latency yokuchukumisa okanye lag input, kunye novakalelo olukhulu lwe-fluidity kunye nokukhaphukhaphu kweentshukumo. Kodwa Ayinanto yakwenza nalomntu sithetha ngaye apha kwaye musani ukudideka. Ngengqiqo, ukuba phezulu zombini iireyithi, ngcono.
Izinga lohlaziyo kwizixhobo ze-Apple
Nje ukuba sibe "ziingcali" kwireyithi yokuhlaziya isikrini kwaye siyayazi indlela yokuyahlula kwisampulu yesampulu, makhe sibone iApple. zeziphi izixhobo ezifikelela kumazinga aphezulu kwaye kubaluleke kangakanani.
I-iPhone 12 kunye ne-13
Zombini i-iPhone 12 kunye ne-13 zinezikrini ezinezinga lokuhlaziya ukuya kuthi ga kwi-120 Hz. Kodwa qaphela, ayizizo zonke iimodeli ze-iPhone ezinomlinganiselo ofanayo. Kule meko, izinga eliphezulu liza kwiimodeli eziphezulu. Siza kuba ne-120HZ kwiimodeli zePro. Ngokusisiseko umba webhetri kunye nobude bokusetyenziswa kwetheminali. Ukuba babebeke isikrini somgangatho kwi-iPhone mini, kunokwenzeka ukuba ngesiqingatha sosuku kuya kufuneka sikhangele iplagi.
IPodemos shwankathela izinga lokuhlaziya i-iPhone ngolu hlobo:
iIfowuni 13 Pro kunye ne-iPhone 13 Pro Max Babonisa i-Apple's Super Retina XDR yamva nje ene-ProMotion, enezinga lokuhlaziya eliguquguqukayo le-10Hz ukuya kwi-120Hz. I-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 Mini isebenzisa i-60Hz.
Okufanayo kuya kwiimodeli ze-iPhone 12
Inokuba ngaphantsi njani, ukuba i-iPhone ineProMotion, iiMacs, nazo. Kodwa ungacingi ukuba zonke iiMacs.Sukucinga ukuba ngenxa yokuba ziikhompyuter kufuneka zibenezikrini ezinamazinga aphezulu okuhlaziya. Sele uyazi ukuba ireyithi ephezulu kunye nescreen esikhulu, ibiza kakhulu. Inyaniso iimodeli ezimbalwa zine-120 Hz iziboniso ezinxulumene nazo.
Enye yezinto ezintsha ezintle ze Intsha entsha ye-14 intshi kunye ne-16 intshi iMacBook Pros yiyo kanye le. Isibonisi se-mini-LED sixhasa ukuya kuthi ga kwi-120 Hz izinga lokuhlaziya enkosi kwiProMotion. Unyuso ekufuneka luvulwe yisoftware. Ke ngoko sele uyifumene into yokuba sinokwahluka eso santya. Into engeyonto intsha, kuba besinokuzenza kwezinye iiMacs zangaphambili. Ukuba awuyazi ukuba njani, Apha unesifundo malunga nokuba ungatshintsha njani ireyithi yokuhlaziya kwi-16-intshi yeMacBook Pro. Sinokuhamba ukusuka kwi-60 ukuya kwi-47,95 Hz.
Nangona kunjalo, le frikhwensi ye-120 Hz ayixhaswanga zizo zonke izicelo okwangoku. Ngapha koko, iSafari, umzekelo, ayikalungiswa. Nangona kunjalo Umboniso weSafari Technology, inguqulelo beta ye Safari, ewe. Ikwinguqulelo yamva nje yesi sikhangeli, 135, apho i-Apple yazisa inkxaso ye-ProMotion.
Ukuba uyazibuza, ndiya kukuxelela. Hayi. Akukho iMac eneProMotion. Kodwa kuya kubakho.
Andiyi kuba nguye oya kukumangalisa, kodwa njengoko unokucinga, i-Apple Watch ayinaso isikrini seProMotion. Ngumboniso olungileyo weRetina, ewe. Kodwa ayifikeleli kumazinga ayi-120Hz. Andiqondi ukuba nam bendiwadinga.
Sele uyazi ngakumbi malunga nale miba yezixhobo zakho ozithandayo. Ukusuka Ngoku ndiqinisekile ukuba unikela ingqalelo ngakumbi kwireyithi yokuhlaziya xa usiya kuthenga i-terminal entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Funda yonke into enxulumene nezinga lokuhlaziya izixhobo zakho Apple
Uzithumela njani iifoto nge-WhatsApp ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho
Ezona wallpapers zibalaseleyo zaselwandle zeMac